I-China i-multi-layer defogging filter mesh/demister pad factory kunye nababoneleli |Guotao
Ukuhamba komoya: 3.5-5.5m/s
Spec.ukuba yenziwe ngokwesicelo sakho.
Ukuhluzwa okuphezulu, okunokucoca inkungu yamanzi, uthuli kunye nomgubo;
Ukwehla koxinzelelo oluphantsi, ukusebenza kakuhle okuphezulu, ukuvaleka akukho lula,
Iyahlamba kwaye isisigxina;
Ukuhluzwa okuphezulu kwiimeko xa inkungu iqulethe uthuli.
I-multi-layer ye-mist eliminator iqinisekisa ukuhla koxinzelelo oluphantsi kunye nokusebenza okuphezulu kuba zonke i-monofilaments zibekwe ngendlela ehambelana nokuhamba kwegesi ukufezekisa ukwahlukana okunokwenzeka kwamathontsi.Lo mluko ukhethekileyo umi ngokuchasa ngokucacileyo ukuqhelaniswa nocingo olungakhethiyo kwiidemisters ezinithiweyo zemesh.
Idibanisa iipropathi ezilungileyo ze-mesh ezinithiweyo kunye ne-lamella separator.Ukulungelelaniswa kwe-ladder ye-monofilament kubangela utshintsho lwendlela yomzila wegesi, okwandisa i-droplet yokubamba ngempembelelo ye-inertial kunye ne-interception.Oku kuvelisa ukuhamba komnqamlezo wolwelo olwahlukileyo, olukhupha amasuntswana phakathi.
Esi sihluzo simaleko amaninzi saziwa nangokupakisha.Ngamanye amaxesha ukupakishwa akukhethi okanye kulahlwa, kwaye ngamanye amaxesha kuyilwe ngokwesiko.
Njengesixhobo sokucoca igesi, ulwakhiwo oluvulekileyo kunye nejiyometri yemesh iququzelela inkqubo yokukhuhla ngezitshizi zokunkcenkceshela ezisebenza ngoku okanye ezichaseneyo. Zifakwe ngokuthe tye okanye ngokuthe tye, ulwelo kunye nezinto eziqinileyo ezithinjiweyo ziya kumpompoza ngokulula zisuka kwiingcingo zemonofilament.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ayizizo zonke izinto zokuphelisa inkungu eziyilwe ngokufanayo.Zininzi izinto eziqwalaselwayo xa ukhetha into yokuphelisa inkungu, ubungakanani bamathontsi, ukuphatha ulwelo, ukuhla koxinzelelo, kunye nokuhambelana kwezinto zokwakha.Isixhobo sokuphelisa inkungu esiyilwe ngokufanelekileyo siya kongeza izibonelelo ezininzi kwinkqubo, njengokuphucula ukucoceka kwemveliso, ukunciphisa ungcoliseko, kunye nokunciphisa i-carryover, kunye nokukhusela izixhobo.
Imizekelo yesicelo :
● Ukugxotha umsebenzi ekuphumeni kwenkqubo yekhemikhali yokucoca irhasi
● Ukuphelisa umsebenzi ekupheleni kokuhamba-hamba okanye ukukhuhla kwerhasi ethe nkqo kwimveliso yePhosphate kunye neNitrogen Fertilizer.
● Imisebenzi yeqonga lokukhuhla irhasi phakathi kokuhamba okunqumlayo okanye kokutyhutyha irhasi ethe nkqo kwimveliso yePhosphate neNitrogen Fertilizer (umz. DAP, NPK, CAN & Urea)
● Ukukhuhla umsi okhutshwa yiChrome VI kunye nezinye iintsimbi ezinzima
● Ukuncipha kwenkungu yeHCl kushishino lwezobuKhompyutha
● Ukuphelisa umsebenzi kwi-Sulfuric Acid Drying kunye ne-Absorbing Towers.
Ngaphambili: ecwangcisiweyo ukupakisha inkungu eliminator ezinithiweyo ngentsimbi ngocingo umnatha demister pads
Okulandelayo: intsimbi engenastainless oil inkungu isihluzo / wire ezinithiweyo mesh filter
Izinto eziphambili ziyi-stainless steel 304,316,205, TA1 njl.I-diameter yokupakisha ukusuka kwi-Φ150mm ukuya kwi-12000mm.Iyunithi nganye inobude be-50-200mm, ukupakishwa kuya kwenziwa kwifom yeepads ukuba ububanzi bungaphezu kwe-1.5m.Uhlobo Ukuphakama kwamaza (mm) I-engile echokisiweyo yeshiti leTheory indawo(m-1) Indawo engaphezulu (m2/m3) Ireyithi engenanto(%) Uxinzelelo lwehla(mpa/m) Uxinzelelo (kg/m3) F factor（m/s(kg/ m3)0.5） Umthwalo wolwelo (m3/m2.hr) 125Y 24 45° 1-1.2 125 98.5 2*10(-4) 85-100 3 0.2-100 250Y 12 45° 2-2.07-251 4) 170-200 2.6 0.2-100 350Y 8...
ecwangcisiweyo ukupakisha inkungu eliminator ezinithiweyo meta...
Iinkcukacha Uhlobo Loxinaniso (kg/m3) Indawo yoMphezulu iVoid Ukuhamba komoya Uxinzelelo lwehla SP 168 529.6 0.9788 0.5-0.8 m/s <250pa DP 168 625.5 0.9765 HP 128 403.5 0.98360, 3 HR202, 3 HR202, 38360 2,98360 HR2, 3 HR292, 3 HR2, 38360 29, 29 35 3 HR 625, 29830 13 HP wire 2, 3 35 29 29 Metal njl Ucingo olungelulo-metallic PP、PTFE、PVDF etc Metal + Non-metallic wire SUS 304+PP,SUS 304+Fiberglass etc Ucingo lwentsimbi oluqatywe ngeplastiki SUS 304+PP, SUS 304+PTFE njl njl. intsimbi engenastainless igqwesile...